Zviyeuchidzo zvegeisha: ndiani akazvinyora, ndezvei nezve | Zvazvino Zvinyorwa
Memoir bhuku regeisha
El Mhemberero dze geisha bhuku Yakanga iri budiriro huru apo munyori akaiburitsa, kusvika padanho rekuti rakaramba riri rimwe remabhuku anotengesa zvakanyanya kwemakore maviri, mabhuku mashoma akamboita.
Vazhinji ndeavo vakaiverenga uye vakashamiswa nemamwe maitiro akaitika nevasikana uye mashandiro avakaita mune iro basa, kusvika pakukakavadzana, kunyanya nekuda kwemunhu wavakavimba naye zvakanyanya kunyora basa. Asi chii chaunoziva iwe nezve iro bhuku Memoirs yeGeisha? Tevere isu tichataura nezvake nezvose zvaunowana.
1 Chii chiri bhuku reMemoir yeGeisha nezve
2 Ndeapi mavara mune Zviyeuchidzo zveGeisha
3 Bhuku raive nekukakavara zvakadii
4 Kune mamwe mabhuku here gare gare?
5 Iyo firimu inoenderana neyeMemoirs eGeisha
Chii chiri bhuku reMemoir yeGeisha nezve
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva nezve iro bhuku Memoirs yeGeisha ndeyekuti inhoroondo yenhoroondo. Mariri zviitiko zvechokwadi zvinorondedzerwa, asi panguva imwechete yekunyepedzera. Uye ndizvo munyori, Arthur Golden, akaongorora kweanopfuura makore mashanu kubvunzurudza akasiyana geisha, vamwe vacho vakapiwa mamwe magwaro kupfuura vamwe. Nekudaro, akagadzira nyaya yekunyepedzera zvichienderana nemamiriro ezvinhu anogona kunge ari echokwadi, achiisa muKyoto Hondo Yenyika II isati yatanga.
Mune novel munyori anotizivisa kuna Chiyo, musikana ane runako rwake ari mumaziso ake. Iye anogara nemhuri yake muYoroido uye ane hanzvadzi. Dambudziko nderekuti, kana amai vakarwara, baba vacho havagone kuchengeta vasikana, vozopedzisira vavatengesera muzvinabhizimusi wemuno.
Chiyo anotenda kuti akarerwa, asi nekukurumidza anoona kuti haasi uye anoendeswa kuimba yegeisha muKyoto, achitarisirwa naAmai. Ikoko, anotanga semuranda achitevera rairo dzaHatsumomo uye, kana awana nguva, anoenda kuchikoro chegeisha.
Zvisinei, Hatsumomo anomuona semukwikwidzi, uye anoedza kumubvisa munzira ipi neipi kuitira kuti asazove geisha. Asi kumonyaniswa kweramangwana kunoita kuti Chiyo ave mudzidzi waMameha, geisha rakabudirira kwazvo reGion, uye izvi zvinomugadzirira kuti ave geisha rakanakisa. Kuti aite izvi, anotanga nekushandura zita rake kuti Sayuri.
Hatisi kuzoburitsa zvakawanda nezve rangano iyi, asi iwe unofanirwa kuziva kuti nyaya yaChiyo yakaoma mune dzimwe ndima uye zvinoita kuti muverengi ave nenguva yakaipa paanosangana navo.
Ndeapi mavara mune Zviyeuchidzo zveGeisha
Zvisinei nekuti iro bhuku reChirangaridzo cheGeisha inorondedzerwa sekunge yaive dhayariIchokwadi ndechekuti kune akasiyana mavara ekuteerera. Iwo makuru ndeaya:
Chiyo. Iye ndiye anopokana protagonist, hunhu uyo ​​anoonekwa achichinja munhoroondo.
Hatsumomo. Anokwikwidza naChiyo. Iye akanaka kwazvo uye akabudirira kwazvo, asi ruvengo rwake, godo uye kudada zvinomupofomadza kusvika padanho rekubvuta chero zano rekutadzisa chero munhu kubva pamusoro pake.
Nhanga. Ndiye shamwari yekutanga yaChiyo paanosvika kumba kwegeisha. Ane budiriro huru kwenguva pfupi, achibatsirwa naHatsumomo kumuendesa kure naChiyo.
Mameha. Ndiye mumwe geisha, akanakisa mudunhu iri, uyezve ane kuzvimiririra kwake nekuva nedhana inomubhadharira mari (murume anomubhadharira).
Mutungamiri. Anonzi Iwamura Ken uye akasangana kakawanda naChiyo. Kwaari ndicho chikonzero chekuve geisha.
Jenerali Tottori. Ndiro danna rekutanga reChiyo (Sayuri).
Bhuku raive nekukakavara zvakadii
Memoir dzeGeisha ibhuku rinoratidza, pasina kutindivadza, hupenyu hwemusikana kubva panguva iyo mhuri "yaanomutengesa" kusvika ave geisha. Nekudaro, izvi hazvisi zvekunyepedzera zvachose, asi zvinonyatsoenderana nezvakaitika kune vamwe vakadzi, munyori waro, Arthur Golden. Mumwe wavo, Mineko Iwasaki, ndiye ainyanya kuzivikanwa neruzivo, uye nekuda kwechikonzero ichocho, mushure mekunge chaburitswa, akazvishora nekuti chakatyora chibvumirano chemunyori (sekureva kwaIwasaki, akavimbisa kusazivikanwa zvachose, nekuda kwe nekuti pane kodhi yekunyarara pakati pegeisha uye kuiputsa yaive mhosva huru).
Zvakare, mumashoko aIwasaki, iro bhuku Memoirs reGeisha raireva kuti geisha aingova epamusoro-pfambi, apo zvaive zvisiri izvo. Uye zvaive zvisiri zvechokwadi kuti vabereki vaIwasaki vakamutengesa iye kune geisha kana kuti humhandara hwake hwakatengeswa kumupi wepamusoro.
Kunetsana uku kwakagadziriswa nechibvumirano chisiri chematare pakati pemunyori uye geisha chemari isina kuziviswa.
Kune mamwe mabhuku here gare gare?
Kune mabhuku akafanana neMemoir eGeisha, asi kwete sechikamu chechipiri cheichi. Zvino, mushure mematare aive naMineko Iwasaki, akaburitsa bhuku, nhoroondo yehupenyu iyo yaakataura nyaya yechokwadi yezvakaita mageisha. Zita rake raive Hupenyu hweGeisha uye hwakaburitswa muna2004.
Iyo firimu inoenderana neyeMemoirs eGeisha
Iwe unofanirwa kuziva kuti bhuku, mushure mekubudirira kwaraive naro mukutengesa, raive chinangwa chemakambani mazhinji ekugadzira avo vaida kuendesa kuchiratidziro chikuru. Uye vakabudirira.
Kugadziriswa kwebhuku, iro zita raro raive rakafanana, yakaratidza chikamu chezvaitaurwa mubhuku, kunyangwe zvisiri zvese, uye nekuchinja zvimwe zvidimbu zvine chekuita nenyaya chaiyo. Semuenzaniso, chimwe chezviitiko zvinotyisa mumamuvhi chinosanganisira moto, apo imba yaSayuri ikabatira moto mushure mekukakavadzana naHatsumomo uye iye akazodonha mushure meizvi. Mubhuku, kudonha kunononoka, uye kumagumo chete ndipo Mameha naSayuri vanomupa iko kwekupedzisira kusundidzira, vachimurega achiva pfambi (mufirimu iye anongonyangarika).
Nekudaro, yaive zvakare yakabudirira uye yakaita kuti bhuku iri mutengesi wepamusoro zvakare kwechinguva.
Neichi chikonzero, isu tinogara tichikurudzira kuverenga bhuku nekuti rinopa chiratidzo, dzimwe nguva rakasiyana zvachose nezvakaonekwa paterevhizheni (kana mu cinema).
Wakamboverenga here Zviyeuchidzo zvebhuku reGeisha? Iwe unofungei nezvazvo? Tinoda kunzwa mafungiro ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Memoir bhuku regeisha
Musi unodonha denga